Ikhaya | Subsidiary company from GuangDong Jueheng Group
Sihlose ukunikeza abalingani bethu imikhiqizo emisha esezingeni eliphansi enamanani aphansi.
Cement Bathroom Izesekeli
Bangaphezu kuka-5000 amasethi atholakalayo!
Resin / ngobumba / usimende / terrazzo
Izesekeli zokugeza / umhlobiso wasekhaya / i-tableware ye-ceramic
I-Guangdong JueHeng Group itholakala eDongguan City, esifundazweni saseGuangdong. Sisebenza ngokukhiqiza izesekeli zokugezela ezisethwe njengamasethi wesesekeli se-polyresin yokugezela, izesekeli zangasese ze-ceramic, izesekeli zangasese zokugeza, ukuhlobisa ikhaya kanye ne-tableware ye-ceramic yabathengisi abahamba phambili eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Europe, eMiddle East nasemhlabeni jikelele.
I-Chinoiserie ivory ceramic bathroom accessories accessories manufacturer amasethi okugeza
I-resin ecacile ngaphakathi kwe-Stereoscopic rock effect izesekeli zokugeza zaseshayina
Izisetshenziswa zezesekeli zokugezela eziluhlaza okwesibhakabhaka zaseChinoiserie
Imination ephuzi yokulingisa i-rattan resin yokugezela izesekeli
■ Isipiliyoni sokusebenza se-Yeas yokuhlinzeka ngezinto zokugezela eziyi-12
Isungulwe ngo-2007, is a researchsearch, production, sales inone of high-tech enterprise, brought together a number of theoretical theory and richpractical experience of seniortechnical personal.
■ Iqembu elinamandla
Le nkampani ifakwe okomuntu siqu kwezobuchwepheshe, ithuthukise isoftware yayo yokulinganisa, futhi ithole isitifiketi se-patent software.
■ Isevisi Yobungcweti / Emuva Kokuthengisa
Sinikeza ngezinsizakalo zemisebenzi yokuthengisa ngemuva, njengoku: ukufundisa ngevidiyo, ukufundisa ngocingo, izinsiza ezikude, izincwajana, njll.
■ Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi
Inkampani yethu isivele inamalungelo obunikazi amaningi wokuqamba, ithole ulwazi lukazwelonke lwesitifiketi sokubhaliswa kwe-copyright.
IGuangdong JueHeng Group - Umhlinzeki Wezinsiza Zokugeza
I-Guangdong JueHeng Group, umphakeli wezesekeli zokugezela, itholakala eDongguan City, esifundazweni saseGuangdong. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izesekeli zokugezela setha isixhumanisi se-polyresin yokugezela izesekeli, izesekeli zangasese zangasese, izesekeli zesamente zangasese, ukuhlobisa ikhaya ne-tableware ye-ceramic yabathengisi abahamba phambili eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, e-Middle East nasemhlabeni jikelele.
Sinezimboni ezingama-7 ezihlanganisa amamitha-skwele angama-35,000 futhi zinabasebenzi abangaphezu kwama-600. Ngineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni sokusebenza neqembu lobuchwepheshe, saklama amasethi wesesekeli sokugezela angaphezu kuka-5,000. Siqhuba ibhizinisi nabadayisi nabakhiqizi ngokufanayo futhi sisebenze izinkampani ezahlukahlukene zeFortune 500 ezifana neBed Bath
Ngaphesheya, iWalmart, uH
& M, Hilton, TJmaxx, ALDI, Target, noWilliam Sonoma.
Sazisa kakhulu imibono yamakhasimende ethu futhi sifuna ukuwanikeza ngezinsizakalo eziqeqeshiwe kakhulu.
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yakho yocingo efomini lokuxhumana bese singaxhumana nawe！